ယူကေ Mini-Series National Treasure အတွက် Lectrosonics မှဖမ်းယူသောသက်ပြင်းတိုင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » တိုင်းထွက်သက်တော်သည်ဗြိတိန် Mini ကို-စီးရီးအမျိုးသားရတနာများအတွက် Lectrosonics အားဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရသောညညျးတှားခွငျး
တိုင်းထွက်သက်တော်သည်ဗြိတိန် Mini ကို-စီးရီးအမျိုးသားရတနာများအတွက် Lectrosonics အားဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရသောညညျးတှားခွငျး
လန်ဒန်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ (ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2017) -UK-based ဆုရထုတ်လုပ်မှုသံကိုရောနှော Nigel Albermaniche "အမျိုးသားရတနာ," နှောင်းပိုင်းတွင်4အတွက် Channel ကို 2016 အပေါ်ထုတ်လွှင့်မယ့်ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပြီးကောင်းချီးရုပ်မြင်သံကြား Mini-စီးရီးအပေါ်ဖန်တီးမှုအသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ထူးခြားတဲ့ပူးပေါင်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်း Albermaniche အသက်ရှု SMV, SMQV, HM နှင့် IFB က transmitter နှင့်နေရာအသံဖမ်းအပါအဝင်ဇာတ်လမ်း၏ဒရာမာပြင်းထန်လာကူညီရန် Lectrosonics ဒစ်ဂျစ်တယ် Hybrid ကိုကြိုးမဲ့ကိရိယာများသူ့လက်နက်တိုက်သုံးပြီးဦးဆောင်သရုပ်ဆောင်တွေကနေအသံအနီးကပ်တက်၏နာရီဖမ်းမိ။
ရော်ဘီ Coltrane, ဂျူလီ Walters က, Andrea Riseborough နှင့်တိ McInnerny သရုပ်ဆောင် "အမျိုးသားရတနာ," မကြာသေးမီနှစ်အတွင်းအမျိုးမျိုးသောဗြိတိန်နာမည်ကြီးတွေဆန့်ကျင်ညှိပြီးခဲ့ဆယ်စုနှစ်ပြန်ချိန်းတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစွပ်စွဲချက်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေတဲ့ဒရာမာဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားရေးဘဏ္ဍာကို - - မိမိသမီးရဲ့ကလေးထိန်းအနှစ်အစောပိုင်းကတိုက်ခိုက်ရန်စွပ်စွဲသူ Channel ကို4ရဲ့လေးစိတျအပိုငျးစီးရီးမှာတော့ Coltrane အလွန်လူကြိုက်များစိတ်ကူးယဉ်လူရွှင်တော်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။
Albermaniche ပြောပြတယ်အမျှညွှန်ကြားရေးမှူးမာ့ခ် Munden ဒရာမာအဘို့အစမ်းလေ့ကျင့်၏ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ Coltrane ရဲ့အလုပ်သမားရေးရာအသက်ရှူပေါ်တက်ခူးနှင့်ဇာတ်ကောင်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဆက်သွယ်ဖို့ကဖမ်းဆီးဖို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကစာရေးဆရာ, ဂျက်အစေ့တို့သည်ဆူးပင်တွေနဲ့စကားပြော, သူသည်အသက်တော်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကဆက်ပြောသည်, ရော်ဘီအတော်လေးကြီးမားတဲ့သူဖြစ်၏နှင့်တက်ရနှင့်ဇာတ်ညွှန်းသို့လမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားနေရဆဲဆိုတဲ့အချက်ကို," Albermaniche သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
သူက "ကျနော်တို့တိုင်း splutter, အသက်ရှုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှညည်းတွားနေတဲ့စနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ " ဆက်လက်အဆိုပါဝတ်စုံဌာန Coltrane ရဲ့အဝတ်အစားတွေသို့ Lectrosonics SMQV က transmitter နဲ့ပေါင်းပြီး Sanken COS11 lavalier မိုက်ခရိုဖုန်းချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်, Albermaniche ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကသဘာဝကျကျရိုက်ကူးပေါ်တွင်ထပ်တူပြုခြင်းအတွက်ရော်ဘီရဲ့အသက်ရှုလေးနှင့်တစ်နှစ်ခွဲနာရီကျော်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အသေးစိတ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအလွှာကိုဖန်တီးရန်လုံးကိုလမ်းမှတဆင့်သူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ "
နှစ်စဉ် BAFTA ဆုအခမ်းအနားတွင်ရိုက်ကူးနေတဲ့လူအစုအဝေးမြင်ကွင်းအဘို့, Albermaniche တစ်ခု Octopack နှင့်နေရာအသံဖမ်းပေါင်း SMV, SMQV နှင့် HM က transmitter တရံအပါအဝင် Lectrosonics ပစ္စည်းကိရိယာများသူ၏အပြည့်အဝအဖြည့်ချထား။ "ကျနော်တို့က 200-ပေါင်း extras ခဲ့ရပြီးလူအစုအဝေးအတွင်းအမျိုးမျိုးသောရာထူးအတွက်ဒါဇင်ပေါင်း MICS စိုက်၏။ ငါနှစ်ခု Venue အသံဖမ်းအပေါ် running 12 လိုင်းများခဲ့, ပြီးတော့ငါတို့သည်လည်းအားလုံး 16 ရဖို့တစ်ခု Octopack လက်ခံသို့ပွေးလေ၏။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျလူအစုအဝေးကြားရတဲ့အခါက Foley သို့မဟုတ်စာကြည့်တိုက်အသံမဟုတ်ပါဘူး။ "
Albermaniche သူကအခြားပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. များစွာကိုလိုင်းများကို run ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်ကပြောပါတယ်။ သငျသညျဖန်တီးမှုဖြစ်ချင်သည့်အခါ "Lectrosonics ပစ္စည်းကိရိယာများအလွန်အသုံးဝင်သည် - သင်အကွာအဝေးဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်နေ - ဒါယုံကြည်စိတ်ချရသောပါပဲ။ ဆိတ်ကွယ်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပိုဆောင်းလိုင်းများအနေဖြင့်, လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမ ADR ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သဘာဝကျကျအရာအားလုံးတယ်။ Lectrosonics အစဉ်ငါ့သွားလာရင်းမှဖြစ်ကြသည်။ "
သူလည်း Coltrane ရဲ့သမီးကစားသူ Andrea Riseborough ကဝတ်ဆင်အဆိုပါဝတ်စုံအတွက် Lectrosonics က transmitter နှင့် Sanken MICS ဝှက်ထား၏။ "သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးအသံတိတ်အမျိုးအစားကိုပိုခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်သူမကိုနှင့်အတူစကားပြောဆိုသည်ကား, ငါတို့သည်သင်တို့ညည်းတွားသို့မဟုတ်အသက်ပြင်းပြင်းရှူယူဘယ်မှာသူတို့အားအချိန်လေးရှိသည်ဖို့သငျသညျလိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြပွဲအတွက်သူတို့ကိုအသုံးချနိုင်အောင်, သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိကြလော့။ cos lavs ပူးတွဲအတူကျွန်တော်တို့သည်သူမ၏လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပေါ်သည်, One-ဘက်ထရီဗားရှင်းနှစ်ခု SMV က transmitter ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့သူမ၏ဝတ်စုံအတွက်က transmitter ကိုဝှကျထားသူကိုပင်သူမသူတို့အပေါ်မှာရှိခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပေ။ အဆိုပါမင်းသားများအားလုံးအချိန်များတွင်သူတို့အားတခုတခုအပေါ်မှာ SMQV ရှိခြင်းနှုတ်ဆက်ပြီးနှင့်၎င်းတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အတူသင်မည်သည့်ကိစ္စများမရှိဘဲအရာရာဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ငါသိ၏။ "
အဆိုပါ Lectrosonics က transmitter ဝတ်စုံသို့လုံခြုံစွာချုပ်နှင့်အတူ, Albermaniche အဝေးမှ devices တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသံထှကျသေံကယ်တင်သော LectroRM app ကိုအလုပ်။ "တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးဆူညံသံဟာကြိမ်နှုန်းသည်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ချွတ်ကဖွင့်နိုင်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့အတွက်ဘက်ထရီထားနံနက်ယံ၌အိပ်အရာအားလုံးကိုသွင်းထား, ပြီးတော့သူတို့ကိုချုပ်ရလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းအမြဲတမ်း dial-up သေံဆူညံသံနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ သူတို့ကငါလုပ်နေတာဘာကိုမေးမယ်လို့ငါပေါ်တွင်မိုက်လှည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှကျနော်တို့ကဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြင်ကွင်းတစ်ခုရိုက်ကူးခဲ့ကြသည့်အခါအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားမယ့်လော်စပီကာကိုကျော်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကကစားခဲ့ပါတယ်။ "
အဆိုပါသင်္ဘောသားဒါ့အပြင်လမ်းလျှောက်အများကြီးပါဝင်ပတ်သက်ရသောရိုက်ကူးပေါ်တွင် Lectrosonics IFB က transmitter နှင့်အသံဖမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ "မာ့ခ်ဟာမော်နီတာဖမ်းပြီးကင်မရာနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ဖို့ likes ။ အဆိုပါ Lectrosonics IFBs မယုံနိုင်စရာရှိပါသည်။ သူတို့ကမိုင်အဘို့အသွားနိုင်တယ်။ "
Albermaniche တွင်အနုပညာရုပ်ရှင် ၅၀ ကျော်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှုများစွာရှိသော်လည်းဤထုတ်လုပ်မှုသည်တမူထူးခြားသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်ဟုသူကဆိုသည်။ “ ပုံပြင်ပြောခြင်းကို Sonic ကလွှမ်းမိုးခြင်းဆိုတာတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ Jack Thorne သည်ဇာတ်ညွှန်း၏အစတွင်သူဇာတ်ကောင်များ၏ကြားနိုင်သည့်အသံများကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်သူတို့၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသာမကသူတို့၏သက်ပြင်းချခြင်း၊ အသက်ရှုခြင်း၊ ခေတ္တရပ်နားခြင်း၊ ထို့နောက်သင်သည်သူနှင့်စကားပြောပြီး 'ငါအသက်ရှူ' ဇာတ်ကောင်များနှင့်အလုပ်လုပ်တော့မည်။ ပြီးတော့အဲဒီ့ရှုထောင့်တွေအက္ခရာမှာပေါ်လာတယ်။ ဒါရိုက်တာမာ့ခ်မန်ဒန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထူးခြားသောအချိန်အခါများကိုရရှိရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသံသည်ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိကကျသည့်အသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အဓိကကျသည်။ ဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော့်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။
အသံဖမ်းစက် Reid Mangan သည် PBS ၏အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲများကိုယခုအခါ Lectrosonics နှင့်အတူနားထောင်ပါ - စက်တင်ဘာလ 8, 2020
Sound Recordist ဂျက်ဂွတ်ဒ်မန်းသည် Lectrosonics Skydiving ကို Rappers နှင့်လေပူဖောင်းများဖြင့် ပြုလုပ်၍ The Tonight Show ၌ပြသသည်။ - သြဂုတ်လ 25, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-02-23
ယခင်: Autodesk နိုင်ပွဲများကဒီဆုပေးပွဲရာသီနှစ်ဆနေကြတယ်
နောက်တစ်ခု: ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ Colortime Facility Post ကို-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Dalet လုပ်ငန်းအသွားအလာ orchestral နှင့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူလိုင်းအကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများ Industrializes